တောင်းစားကြသူများ…. Beggar | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တောင်းစားကြသူများ…. Beggar
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Dec 3, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary, Think Different | 24 comments
ရုံးပိတ်ရက်တစ်မနက် အိမ်မှာထိုင်နေတုန်း အပြင်ကယောက်ကျား အသံတစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်
ကျုပ်ပြူတင်းပေါက်ကနေကြည့်လိုက်တော့ အသက်၇၀ လောက်ဘုန်းကြီးတစ်ပါး
ကျုပ်ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ လူတချို့ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ စသဖြင့်လှူနေကြတာတွေ့ရတယ်…
ကျုပ်ကတော့လှူဖို့ စိတ်ကူးပေါ်မလာပဲ စဉ်းစားနေမိတယ်…လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လလောက်က
တကယ်ကုသဖို့လိုရင်ကော ဇိဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကို ဘာလို့မသွားသလည်း…စသဖြင့်
တွေးရင်းကြည့်နေစဉ်မှာပဲ ခဏတာအချိန်လေးအတွင်းမှာတင် လမ်းသွားလမ်းလာနဲ့ အပေါ်ထပ်အောက်ထပ်တွေက လှူကြတာ..သုံးလေးထောင်လောက်ရှိလိမ့်မယ်…
အံ့သြစရာ ကုသိုလ်လောဘကြီးသူ မြန်မာများပါတကား…
ကျုပ်ကတော့ သေသေချာချာရိပ်မိတယ်…ဒါသင်္ဃန်းခြုံပြီး လိမ်တောင်းနေတယ်ဆိုတာ…
တကယ်ဆို ရ၀တ လုပ်သူတွေက ရပ်ကွက်ထဲ ၀င်လာတဲ့အလှူခံတွေကိုစိစစ် သင့်တယ်ထင်မိတယ် :I:
“ရန်ကုန်ကိုဆေးလာကုရင်း လမ်းစရိတ်ပြတ်သွားလို့ …ငွေငါးရာလောက် ကူညီပါရှင်”..တဲ့
ဒါတွေလည်းအတူတူပါပဲ…မကြာခဏတွေ့ရတတ်တဲ့ လိမ်တောင်းနည်းတစ်မျိုးပါပဲ… :dd:
အထူးသဖြင့် လဘက်ရည်ဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ လိုက်တောင်းနေတဲ့
သင်္ဃန်းဝတ်ချာတိတ်လေးတွေပါပဲ…၉၉ ရာနှုံးလောက်က လိမ်တောင်းစားနေကြတာပါ
စားစရာမရှိလို့ ရိုးရိုးသားသား ဘူးခွံ ပုလင်းခွံ လိုက်ကောက်နေသူလေးတွေကို
လက်ခံနိုင်ပါတယ်…ကျုပ်ဆို အိမ်မှာစုမိထားတဲ့ ဘူးခွံ ပုလင်းခွံတွေ တောင်ထုတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်
ကျုပ်ရယ် ဦးပါလေရာရယ် ကိုဘလက်ချောရယ် ကိုရင်ဆာမိရယ် ချောင်းဝနားက
လဘက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးလေပစ်နေကြတုန်း အသက် ၄၀လောက် ခပ်နွမ်းနွမ်းမိန်းမတစ်ယောက်
ဘေးနားကစားပွဲမှာလာထိုင်ပြီး ကျုပ်တို့ဝိုင်းကို လှမ်းပြောတယ်…
ဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်း ရပါတယ် မှာသောက်ပါဗျာ…လို့ပြောလိုက်တော့..လဘက်ရည်မှာသောက်ပြီး
၀ယ်တိုက်လိုက်ရတာကိုလည်း ကျေနပ်မိတယ်….. :b:
ခုတလော ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာလည်း အဲ့ဒီလိုလိမ်နည်းတွေ ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ ရေးတင်နေကြတာ
သတိပြုမိပါရဲ့…စပါးတွဲရောင်းတဲ့သားအဖ ကိစ္စလေးလည်း တော်တော်ခေတ်စားသွားတယ်..
အဲ့ဒီကိစ္စကို ကျုပ်တို့ရွာသား Kogyi mind (မဟာမိုင်း) ကဒီလိုတင်ပြထားတယ်…
မဟာ မိုင်း shared Ko Kyuu Kyaw’s photo.
28 November at 11:38 •
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်၊ ဒီပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖေ့ဘုတ်မှာ တော်တော်လူပြောသူပြောများနေတယ်။ အားလုံးရဲ့ သဒ္ဓါတရားကို ဖျက်လို၊ ဖျက်ဆီးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဒီပို့စ်ကိုရေးခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဒီကလေးအရွယ်ဟာ ဒီလိုချီထားစရာလည်းမလိုပါဘူး၊ ပြီးတော့ ဈေးရောင်းထွက်လာတဲ့အချိန် အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့ ကလေးဖော်တွေရှိတဲ့နေရာမှာ အပ်ထားခဲ့လို့လည်းရပါတယ်။ အဲသလိုအပ်ပြီး လင်ရော၊ မယားပါ ဈေးထွက်ရောင်းတာတွေ အများကြီးမြင်ဖူးပါတယ်။
အဲဒီကလေးကိုထိန်းဖို့ မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးတစ်စုံတစ်ယောက်လောက်မှ မရှိလို့ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကြားက ကလေးကိုပွေ့ပြီးဈေးလည်ရောင်းတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားကြည့်သင့်တယ်။
စပါးစည်းလို အရာမျိုးကိုလည်ရောင်းတယ်ဆိုတာ ကလေးသူငယ်တွေ၊ ဘာမှ မလုပ်တတ်၊ မကိုင်တတ်ဖြစ်တဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေပဲလုပ်တာပါ၊
စင်္ကာပူလိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင် ဘလိုင်းကြီးပိုက်ဆံတောင်းရတာ မကောင်းတတ်လို့ တစ်ရှုးပေပါလေးတွေ ကမ်းတဲ့သဘောပါပဲ။
ပြီးတော့ သူ့ကိုကြည့်ရတာ ခေါင်းမူးနေပုံရပါတယ်။ ခေါင်းမူးတာဟာ ရောဂါရှာလို့မရပါဘူး၊ ပြီးတော့ ဂရုဏာရှင်တစ်ချို့ရဲ့ ပေးကမ်းထောက်ပံ့မှုကိုလည်း မြိုးမြိုးမျက်မျက်လေးကလေးရနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါသေးတယ်။
လူလိမ်လား၊ လူကောင်းလားဆိုတာ အကဲခတ်ကြစေချင်ပါတယ်။
<blockquote>တစ်ခါ ပတ်စပို့လုပ်တော့ ဘဏ်သွားဆောင်တာမှာ အဘွားကြီးတျောက် ပဲခူးပြန်ဖို့လမ်းစရိတ်မရှိလို့ပါဆိုလို့ ပေးဖူးတယ်။ တစ်လကြာပြိးစာအုပ် ထုတ်တော့ အဲ့ဒီအဘွားပဲ ပဲခူးပြန်ဖို့လမ်းစရိတ်မရှိဘူးပြောလာပြန်တယ်။မရှိတော့ တောင်းစား၊လိမ်စား၊ ခိုးစားကြတာပါပဲ။
မရှိဘူးဆိုတာက ပညာမရှိ၊ ပိုက်ဆံမရှိ၊အလုပ်အကိုင်ကောင်းမရှိတာကအစ ပါလိမ့်မယ်။</blockquote>
<blockquote>ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။၁၉၉၆ဝန်းကျင်လောက် ဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ ၄၆လမ်းဒေါင့်နားမှာ ကလေးချီထားပြီး အင်းစိန်ပြန်ဖို့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ကူညီပါပြောလို့ ငွေ၂၅ကျပ်ပေးလိုက်တယ်။၂၅ကျပ်ဆိုလို့ အဲဒီအချိန်က ၂၅ကျပ်တန်ဘိုးက မနည်းဘူး။ကိုယ်လည်း အကူအညီပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲကြည်နူးသွားတာပေါ့။ကိုယ်က ၄၆လမ်းက ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတာ။နောက်နေ့လည်း ဒီသားအဖဘဲပြန်တွေ့တော့ ။မိတ်ဆွေတို့ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။အဓိကပြဿ နာက ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်မယူနိုင်တဲ့အပြင် လူမမယ်ကလေးတွေကိုပါ တန်ဆာခံလိုလုပ်နေတာကတော့ ရုပ်ပျက်လှပေတယ်။ပြင်ရမယ့်အကျင့်တွေကတော့ မသိတာရယ်၊ဥာဏ်မမီတာရယ်၊အတုယူမှားတာရယ်၊ရေသာခိုချင်စိတ်ရယ်၊အလွယ်လမ်းလိုက်တာရယ်၊ရိုးရာအစွဲကြောင့်ရယ်၊ပြောမဲ့သူမရှိတာရယ်…….စသဖြင့်အများကြီးပါ။ကိုယ်တိုင်လည်း သိသမျှ ပြင်နေပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့လည်းပြင်ပါ။အဓိက အချောင်လို အလကားလိုချင်စိတ်ကို သတိထားပါ။အရာရာကို တန်ဘိုးထားတဲ့အမြင်လေးနဲ့နေထိုင်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်တန်ဘိုးကအရေးကြီးဆုံးလို့ မြင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများကျန်းမာပါစေဗျာ။</blockquote>
ကျုပ်တို့ရွာသား ကိုရာဟု( ရာမည)ကလည်း ဒီလိုပုံလေးနဲ့ပဲ သူတွေ့ခဲ့ရတဲ့
အထက(၂) ကမာရွတ် ကျောင်းရှေ့မှာပုံစံတူ စပါးတွဲသည် သားအဖ
အကြောင်း • စာရေး/စာဖတ်ဝါသနာရှင်များ ဂရုမှာ တင်ထားပါသေးတယ်…
သူ့ပုံ နဲ့ နေရာက နောက်တစ်မျိုး…
<blockquote>ကိုမိုင်းနဲ့တကွ ကော်မန့် ပေးကြသူ တချို့ကို ပြောစရာလေးတစ်ခုပြောခွင့်ပြုပါ။
ကျွန်တော် သည်လည်း ထိုကဲ့သို့ပဲကိုယ့်မရှိတဲ့
ကြားက တကယ်ဒုက္ခရောက်သူတွေ့ရင် ကူညီပေး
သို့ပေမယ့် ခုကိစ္စမှာတော့ ကိုမိုင်းထောက်ပြ
ဘာလို့ဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီကို
ရယူခြင်း ဆိုရာမှာ စည်းမျဉ်း ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာလဲဆိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်ဦးတစ်ယောက် ဆီက အကူအညီယူရာမှာ
အကူအညီယူသူသည် အယူခံရသူထက် တစ်နည်း
နည်းမှာ အားနည်းလိုအပ်နေသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
တစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုပဲ မှန်ကန်သော အကူ
ရှိရပါမယ်။ ဒီလိုမျိုးမရှိတဲ့ အကူအညီ ပေးယူမှု
ဟာ အကူအညီပြုရာ မရောက်ပါဘူး။
လိမ်လည်မှုကို အားပေးရာ သာရောက်ပါတယ်။</blockquote>
စာဖတ်သူတို့လည်းနိစ္စဓူဝ သွားလာနေထိုင်ကြရင်း တောင်းရမ်းစားသောက်သူမျိုးစုံတွေ့ဖူးကြမှာပါ
ကျုပ်အမြင်အရတော့ မမှန်မကန်လိမ်လည်အကူအညီတောင်းသူတွေ များလာနေတော့
အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်လို့ တစ်ခါတလေ အကူအညီတောင်းမိသူတွေ အတွက်အကူအညီရနိုင်ဖို့
ခက်ခဲသွားတော့မှာပါ…ကိုယ့်မျက်စေ့ရှေ့မှာ ဒုက္ခရောက်နေသူ ကိုကူညီစောင်မတာဟာ
ဆက်စပ်နေလို့….ကျုပ်ဖတ်ဖူးတဲ့ “မင်းဒင်ရဲ့သက်ခိုင်” စာအုပ်ထဲက ပုံပြင်လေးထုတ်ပြချင်ပါတယ်…
ဇတ်လိုက်ကျော် သက်ခိုင်ကလည်း လိမ်တာကြိုက်ပုံမရပါဘူး…
ကားပေါ် မှာပါလာတဲ့ တပည့်တွေကို “ မင်းတို့လည်း
လိမ်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိမ်ကြကွာ “ဆိုပြီး ကျနော်ကြားဘူးတဲ့ ပသီပုံပြင်တပုဒ်ကို
ရှေးခေတ်အီရတ်နိုင်ငံက သူဌေးကြီးတယောက်အကြောင်းပေါ့။အဲဒီသူဌေးကြီးဟာ မရှိဆင်းရဲ
သားတွေကိုစာနာထောက်ထား တတ်သတဲ့ဗျာ။သူ့မှာ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ မြင်းကောင်း တစီး လည်း
ရှိသတဲ့ ။တခြားသော သူဌေးတွေက သူ့မြင်းရဲ့ကျော်စောလှတဲ့ သတင်းကြောင့် တန်ဘိုးငွေ
အဆမတန်ပေးပြီး ပြန်ရောင်းဘို့် ကမ်းလှမ်းကြသတဲ့ ။ဘယ်လောက်ဈေးပေးပေး
မရောင်းတာကြောင့် မြင်းလာဝယ်တဲ့ သူဌေးတယောက်က “ခင်ဗျား ဒီလောက်တောင်
မရောင်းချင်တဲ့ မြင်းကို ကျုပ်မရရအောင် ယူပြမယ်လို့ ကြိမ်းဝါးပြီး ပြန်သွားပါသတဲ့ ။
ဒီလိုနဲ့ ရက်အတန်ကြာလာတော့ မြင်းပိုင်ရှင် သူဌေးဟာ သူ့မြင်းကို စီးပြီး ဒမတ်စကတ်
မြို့ဖက်ကို ခရီးထွက်လာတော့ လမ်းမှာ လဲနေတဲ့ သူတောင်းစားတယောက်ကို တွေ့ရပါလေ
ရော။ဒါနဲ့ သူဌေးဟာ မြင်းကို ရပ်ပြီး သူတောင်းစားကို အကျိုးအကြောင်းမေးတော့ အစာမစား
ရတာ သုံးရက်တောင် ရှိပါပြီလို့ ဖြေသတဲ့ ။ဒီတော့ သူဌေးက ငွေစတချို့ထုတ်ပေးပြီး “ ရော့ ၊
ဒီငွေနဲ့ မင်းအစားဝယ်စားပေတော့ လို့လည်း ပြောရော သူတောင်းစားက “ထမင်းသုံးရက်
မစားရတဲ့ သူဟာ ဘယ်လိုလုပ် ထမင်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကို လျှောက်သွားနိုင်မလဲလို့ အထွန့်
တက်ပြန်တော့၊ သူဌေးကြီးကလည်း “မင်းပြောတာ မှန်သားပဲ၊ဒါဆို မြင်းပေါ်ကို တက်“ လို့
ဒီအခါမှာလည်း သူတောင်းစားက ထမင်းသုံးရက်မစားရတဲ့ သူက ဘယ်လိုလုပ် မြင်းပေါ်
တက်နိုင်မှာလဲ ဆိုပြန်တော့ သူဌေးက မင်းပြောတာ မှန်တာပဲ လို့ ပြောရင်း မြင်းပေါ်ကဆင်း၊
သူတောင်းစားကို ပွေ့ချီပြီး သူတောင်းစားကို မြင်းပေါ်လည်း တင်လိုက်ရော သူတောင်းစားဟာ
ပကတ်ိလူကောင်းတယောက်လို မြင်းကို ကဆုန်စိုင်း စီးပြီး “ ကဲ၊သူဌေး ၊အခုခင်ဗျား
ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ၊ ခင်ဗျားမြင်းကို ကျနော်ရပြီ “လို့ ပြောပြောဆိုဆို ရုတ်ခြည်း
ရုတ်တရက် မှင်တက်မိသွားတဲ့ မြင်းပိုင်ရှင် သူဌေးဟာ “လက်စသတ်တော့ ဒီလူဟာ တကယ့်
သူတောင်းစားမဟုတ်ပဲ သူ့မြင်းကိုလာဝယ်တုန်းက ကြိမ်းဝါးသွားတဲ့ မြင်းဝယ်သူဆိုတာ
သိလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်း သတိပြန်ဝင်လာပြီး မြင်းစီးပြီး ထွက်သွားတဲ့ အယောင်ဆောင်
သူတောင်းစားကို လက်ပြ တားလိုက်ရင်း “ အင်း ၊ ဟုတ်ပါပြီ၊ အလာဟ်အရှင် အလိုတော်
ရှိရင်ရင်လည်း မင်း ငါ့မြင်းကို အပိုင်သာ ယူသွားပါတော့ ၊ဒါပေမဲ့ ငါ့မြင်းကို မင်းဘယ်လို
ယူသွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကို မှ မပြောပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိကိုတော့ ပေးပါ“လို့ ဆိုသတဲ့ ။
ဒီတော့ အယောင်ဆောင်သူတောင်းစားဟာ ထူးဆန်းလှတဲ့ သူဌေးရဲ့စကားကြောင့် မြင်းကို
ခဏရပ်ပြီး “ ဘာကြောင့် ကျုပ်က သူတပါးကို ပြန်မပြောခိုင်းတာလဲ၊ ခင်ဗျား မြင်းကို အဆုံး
ရှုံးရမှာ မနှမျောဘူးလား ဆိုတော့ သူဌေးက “ ငါ့မြင်းကို နှမြောတာထက် လောကကြီး
ပျက်စီးသွားမှာ ငါပိုပြီး နှမြောလို့ “ ဆိုပဲဗျာ။
သူတောင်းစားလည်း တအံ့တသြနဲ့ ခင်ဗျား မြင်းကို ယူသွားရုံနဲ့ လောကကြီး ပျက်စီးရရော
လားဗျာ“ လို့မေးပြန်တော့ သူဌေးက “ မင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့၊ မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ကူညီ
စောင့်ရှောက်ဘို့ အလာဟ် အရှင်က သင်ကြားဆုံးမထားတယ်၊ မင်းက သူတောင်းစား
ယောင်ဆောင်ပြီး ငါ့မြင်းကို ယူသွားတယ်၊ အဲဒီအကြောင်းကို မင်းက လူတကာကို လျှောက်
ပြောတော့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကို ဘယ်သူမှ ကူညီချင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး၊ဒုက္ခရောက်သူ တွေ
ကူကယ်ရာမဲ့ပြီး ဆိုရင် လောကကြီး ပျက်စီးပြီပေါ့“ ဖြေတယ်တဲ့ဗျာ။
ပုံပြင်ဆုံးတော့ သူတောင်းစားလည်း သတိတရားရပြီး မြင်းကို ပြန်ပေးပြီး သူဌေးကို တောင်းပန်
တာပေါ့။ကျနော်ပြောတဲ့ ပုံပြင်ကို နားထောင်နေတဲ့ကားပေါ်က တပည့်တွေ တယောက်မှ
တုတ်တုတ် မလှုပ် တော့ပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်အလိမ်ခံရတာကို ဝမ်းမနည်း လှပေမဲ့
ဒီလိမ်နည်း ကို ကျနော် မနှစ်မြို့ဘူးဗျာ။
ဒီလိုလေးဗျောင်တောင်းတာကမှ သမဂ္ဂ၀င်တွေတွေ့ရင် ကူညီကြလိမ့်အုံးမယ်
၃၊ ၁၂၊ ၂၀၁၄
သူများဆီက အလကား ရချင်မှတော့ နည်းမျိုးစုံသုံးရတော့မှာပါ့။
တောင်းပုံတောင်းနည်း ကွာတာနဲ့ တပြိုက်နက် ရတဲ့ အခြေအနေကွာတာပေါ့။
သများ က တော့ တောင်းတောင်း မတောင်းတောင်း ….
မောင်ငေးတွေဆို စပွန်ဆာ ပေးချင်တာ။..
“တောက်” “ဒီကိစ္စ နည်းနည်းမှ သူ မကျေနပ်။ ဘယ့်နှယ် အပေးအကမ်း လှူဒါန်းမှု အများဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းမှာ အမေရိကန်နှင့် မြန်မာ ပူးတွဲပထမရသည်တဲ့။
လုံးဝမဖြစ်သင့်။ မြန်မာကပဲ ပူးတွဲမရှိ ပထမ ဖြစ်သင့်သည်။ ကြည့်ရတာ စာရင်းကောက်တဲ့သူတွေ လူမသိသူမသိ ပေးကမ်း လှူဒါန်းနေကြတာတွေကို မသိကြလို့ ဖြစ်မည်။ ဒီစာရင်းတွေသာ သိရင် ဘယ်အမေရိကန်တွေ မြန်မာကို ယှဉ်နိုင်လိမ့်မည်နည်း။
ဒီနေရာမှာတော့ မောင်ရာဇာ ရဲရဲကြီး အာမခံဝံ့သည်။ အမေရိကန်သားတွေ မောင်ရာဇာတို့ မြန်မာတွေလောက် အပေးအကမ်း အလှူအတန်း မရက်ရောလောက်။
ကြည့်လေ မောင်ရာဇာဆို မိုးမလင်းသေးခင်က အိမ်ရှေ့ရောက်လာတဲ့ လော်သံကြောင့် စောစောစီးစီး ငွေနှစ်ရာ လှူပြီးချေပြီ။ မလှူရင်လည်း နားမခံနိုင်။ အိမ်ရှေ့က ခွာမည်မဟုတ်။ မနက်ကဆို ကားမောင်းရင်း လိုင်စင် စစ်တာမြင်လို့ ငွေသုံးထောင် ဆင်းလှူပစ်လိုက်တာ။ ကဲ မင်းတို့ အမေရိကန်တွေ တို့လိုများ လှူဖူးကြလားလို့ မေးပစ်လိုက်ချင်သည်။
မနေ့ကဆို ရပ်ကွက်မှာ ထောက်ခံစာ သွားယူရင်း ငွေတစ်ထောင်၊ ရဲစခန်းမှာ ငွေတစ်ထောင် အဲလိုလှူပစ်ခဲ့တာ။ တစ်ရက် ဝင်ငွေရဲ့ ဘယ်လောက်ဘယ်တွေ ပြောမနေနဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါဆို မလှူလိုက်ရမှာစိုးလို့ ချေးငှားပြီးကို လှူခဲ့ရတာတွေမှ မနည်းမနော။
လုပ်အားပေး လုပ်ခဲ့တာတွေတော့ ပြောပင်မနေချင်။ သိတတ်ပါပြီ ဆိုကတည်းက တစ်အိမ်တစ်ယောက် ထွက်လိုက်လာတာ။ ဟော အခုတောင် ကိုယ်က ဝန်ထမ်းလိုင်းမှာနေတော့ ညနေကျရင် ဖက်ထိပ်ဆိုတာကြီး သွားလုပ်ရဦးမှာ။
ဒါတောင် မောင်ရာဇာ တစ်ယောက်ထဲ အနေနဲ့ပဲ ယှဉ်ကြည့်တာ။ ကျန်တဲ့သူတွေ လှူဒါန်းပေးကမ်းတာ မပါသေး။ အဘအရွယ်၊ အစ်မအရွယ် ရောက်တာနဲ့ တိုက်ဆောက်ပေး၊ ကားဝယ်ပေးနဲ့။ တချို့များဆို ပေးကြကမ်းကြတာမှ သမ္မတကတောင် သုံးသိန်းမကျော်ကြပါနဲ့ဟ လို့ ပြောယူရသည်။
ပြည်သူတွေတင် အပေးအကမ်း ရက်ရောကြတာမဟုတ်။ အစိုးရမင်းများလည်း အပေးအကမ်း ရက်ရောကြတာ ဘေးနိုင်ငံက ပေါက်ဖော်ကြီးတို့သာ မေးကြည့်ကြပေတော့။ သစ်၊ ဝါး၊ ငါးရှဥ့်က စလို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကြေးနီ၊ ကျောက်စိမ်းအထိ ရက်ရက်ရောရော ရောင်းပေးထားတာ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေတောင် အဆစ် ထည့်ပေးထားလိုက်သေး။
နိုင်ငံပိုင်မြေတွေ ဆိုလည်း အလကားမသိမ်းဘဲ ငွေ ၅၀၀၀ မျိုး၊ ၁၀,၀၀၀ မျိုး ပေးပြီးမှ ပြန်ဝယ်နေတာ လူတိုင်းအသိပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်သူတွေ စေတနာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ဆိုတာတော့ အထွေအထူး ပြောနေဖို့ပင် မလိုချေ။ လွှတ်တော်က အမတ်တွေကိုပင်လျှင် တစ်လ သုံးသိန်းနဲ့ မလောက်မင ငိုက်နေရှာမှာစိုးလို့ လစာ တိုးပေးလိုက်တာကို ကြည့်တာနှင့် သိနိုင်သည်။
တပ်မတော်ဆိုလည်း အပေးအကမ်း ရက်ရောသည်။ ဟိုတစ်နေ့ဆီကပင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထံ အမြောက်ဆန်တွေ လက်ဆောင်ပေးလိုက်သည် ကြားသည်။ ဒါပေမဲ့ လက်တော့အစား အမြောက်ဆန်ပေးလို့ ဟိုဘက်က သိပ်တော့ မကျေနပ်။ ပေးချင်လွန်းလို့ တပ်မတော်ကလည်း သူရှိတာပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်မည်။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ အရာတွေက ဒီတစ်ခုတင် မဟုတ်။ ဒုက္ခသည် အများဆုံးစာရင်းနှင့် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး စာရင်းတို့မှာလည်း ထိပ်ဆုံး၌ပင် ရှိသည်။
အချမ်းသာဆုံး စာရင်းကတော့ ပြောင်းပြန်ကြည့်ရလိမ့်မည်။ ဒီလို ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံး စာရင်းတွေ ရောက်ခဲ့တာကလည်း ဘဘကြီးတွေရဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော် ကြိုးစားအားထုတ်မှု ကျေးဇူးမကင်း။ သူတို့သာ လုံ့လမစိုက်ထုတ်ခဲ့လျှင် ဒီလို စာရင်းတွေမှာ ထိပ်ဆုံးရောက်ဖို့ မလွယ်။
ဒါတောင် လူသိရှင်ကြား မဖြစ်သေးသော စာရင်းတို့ ကျန်သေးသည်။ လက်နက်ကိုင် တပ်မတော် အများဆုံးနိုင်ငံ၊ အကွဲအပြဲ အများဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းတို့မှာလည်း စစ်တမ်းကောက်ပါက ထိပ်ဆုံးနေရာ ရှိနိုင်သေးသည်။
အကွဲအပြဲ အများဆုံးနိုင်ငံ စာရင်းမှာတော့ သေချာပေါက် တစ်ပြေးသည်။ ဟိုနေရာကွဲ၊ ဒီနေရာပြဲနှင့် ပြန်ဆက်လို့ပင်မရ။ ဒါကတော့ နှစ်ယောက်ရှိ၊ သုံးဖွဲ့ကွဲသည့် မြန်မာတို့ရဲ့ မူလဗီဇကြောင့် ဟုထင်သည်။
လက်နက်ကိုင် တပ်မတော် ဆိုတာတော့ ရေတွက်လို့ပင် မရနိုင်ချေ။ လူ ၁၀ ယောက်လောက် ရှိရုံမျှနှင့် တပ်မတော်ဆိုပြီး ထဖွဲ့ကြတာ မြန်မာပြည်မှာပဲ ရှိနိုင်မည်ထင်သည်။
ကဲ ဒီတော့ ဒီလောက် ထိပ်ဆုံးစာရင်းတွေမှာ တစ်ပြေးသည့်နိုင်ငံ အခုစာရင်းတွင် ပထမ ပူးတွဲရနေတာ လုံးဝမဖြစ်သင့်။
သူလုံးဝ မကျေနပ်။ ပူးတွဲမရှိ ရသင့်သည်။ ဒီအတွက် ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်ရပေမည်။
ထုံးစံအတိုင်း ဆန္ဒပြမှု အများဆုံး နိုင်ငံလည်း ဖြစ်နေတော့ ဒီကိစ္စကို သူဆန္ဒပြပြီး ကမ္ဘာသိအောင် လုပ်ရမည်။
သံချောင်းပါတီက လူတွေနဲ့လည်း တိုင်ပင်ပြီးသွားပြီ။ သူတို့က လိုက်ပြီး ဝန်းရံပေးကြမည် ပြောသည်။ မီဒီယာသမားတွေကိုလည်း ဘီအီးတစ်လုံး စပွန်ဆာ ပေးခဲ့ပြီ။
ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဒံပေါက်ထုပ်တွေ လာလှူမည့် လူကြီးနှင့်လည်း ချိတ်ထားသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ လောက်လောက်ငင ဖြစ်စေရမည်လို့ အာမခံသွားသည်။
ကဲ ထိပ်ဆုံးကမြန်မာ ဖြစ်စေရေးအတွက် မောင်ရာဇာကို ဝန်းရံပေးကြဖို့သာ လိုတော့သည်
ဟေးးးးးးးးးးးးး ပျော်စယာဂျီးနော့…. ခံနေရတာ မဟုတ်သလိုပဲ
kogyi mind says:
ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူဋ္ဌေးကြီးဟာ တကယ်တော့ မသိလို့အလိမ်ခံလိုက်ရတာဆိုတော့ သူ့အားနည်းချက်က အယုံလွယ်တာပါပဲ၊ သတိထားပြီး တွေးခေါ်မှုကိုဦးစားပေးလိုက်ရင် လူလိမ်တွေနည်းလာမှာပါ။ ဆင်းရဲလို့ပဲလိမ်လိမ်၊ ချမ်းသာလို့ပဲလိမ်လိမ်၊ မစင်ဆိုတာ နည်းများမဆို စက်ဆုပ်စရာချည်းပဲမို့ အဲသလိုလိမ်တဲ့သူတွေဟာ လူယုတ်မာတွေချည်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ စကားလေးဗျ… ကိုကြီးမိုင်းက ဂဇက်ကမှန်း တနေ့က ဦးမိုက်ကို မေးရင်း သိရတာဗျ… မင်္ဂလာပါနော်… FB မှာ ကိုထွဋ်က အနော်ပါ…
.ပထမဆုံးအားပေးသူအဖြစ် ကျေးဇူးပါ..ရှယ်ပေးတဲ့ “ မောင်ရာဇာ” စတေးတတ်လေးလည်းကြိုက်တယ် :))
.kogyi mind ခင်ဗျား…ကိုကြီးမိုင်း စတေးတတ်ကိုသုံးခွင့်ပြုလို့ရယ်..တကူးတကလာရောက်အားပေးလို့ရယ်
ဒါမျိုးက များများရေးသင့် သတိပေးသင့်တယ်ဦးမိုက်ရေ ……
သိပ်မကြာခင်ကဘဲ ဂျန်းရှင်းမော်တင် နားမှာ အနော်ရထာလမ်းပေါ်ကားပါကင်ထိုးတော့
ပါတိတ်ဝမ်းဆက် (ပါတိတ်အညံ့ဖြစ်မှာပါ) နဲ့မိန်းမတစ်ယောက် လာပြီး ကားကိုကြည့်ပေး လက်ပြပေးသဗျ ။
ကျနော်လည်း ကားပါကင်စောင့်တဲ့သူထင်ပြီးအေးဆေးပေါ့လေ ။
အဲ ကားပေါ်ကဆင်းတော့ အနားလာပြီးတောင်ပါလေရော
“”အစ်ကိုကြီးရယ် ၃၀၀၀ (သုံးထောင်) လောက်ပေးခဲ့ပါဦး အပြန်လမ်းစားရိတ်မရှိလို့ “” တဲ့ဗျာ
အဲ့တုန်းက သုံးသောင်းတောင်ပေးခဲ့တာဆို. သဒင်းကြားတယ်..
ပုထုဇဉ်ဆိုတာက ငါးပါးသီလမလုံဘူးဆိုတာကို အသေအချာသိထားလို့ ပါ။။
သောတာပန်တဦးဖြစ်တဲ့.. ပုဏ္ဏားက.. မြတ်စွာဘုရားပုရိနိဗ္ဗာန်ပြုလို့.. ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုခွဲတော့.. မင်းညီမင်းသားတွေဝေစုမတည့်.. စစ်တိုက်ကြမယ်ဖြစ်တော့.. ဒိုင်လုပ်ပြီး..ခွဲဝေပေးတယ်..။ အဲ.. သူလိုချင်တာလေးတော့.. ကျန်သူတွေမသိအောင်အသာယူ”ဘတ်” ထားလိုက်တယ်..
သိကြားမင်း…။ မိန်းမရှုတ်တယ်..။စစ်တိုက်လူ.. အဲ..အဲ.. ယောက္ခမ.. အသူရာမင်းစစ်သည်တွေကိုသတ်တယ်..။
၅ပါးသီလတော့ လုံမလုံ… ဟုတ်မဟုတ်..စဉ်းစားပေတော့…။
၅ပါးသီလဆိုတာ.. ဘုရားဟောမဟုတ်သလို.. ဂေါတမဗုဒ္ဓမပွင့်ခင်ကတည်းကရှိနေတာဖြစ်..။
လိမ်တာတွေထဲ.. ယုံကြည်မှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာ..အဆိုးဆုံးပဲ.. လို့..။
နောက်ဆို ဘုန်းကြီးတွေများ တောင်းနေရင်.. လူကိုလှူတာမဟုတ်…သင်္ကန်းလှူတာဆိုပြီး.. ၀တ္တု(ငွေ)ကပ်လိုက်နော..။
လာဗျံပီ ဒီစဂါး… ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ သာသနာဆိုတာ တဦးတဖွဲ့ပိုင် မမြည်ဘူး မာမွတ်ဘိုင်ရဲ့။။ ဒါကြောင့် စေတနာသန့်လျင် ခိုးတယ် စွတ်စွဲလို့မရ…။ သူများက စေတနာနဲ့ လုပ်ထားတာကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးစိတ်နဲ့ ဒါမှမဟုတ် တဦးပိုင်တယောက်ပိုင် လုပ်လျင်တော့ အပြစ်ရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ် မူလရည်ရွယ်ချက်ပျောက်ပြီး အများက တလွဲသုံးနေ.. ဥပမာဗျာ ရွှေတိဂုံစေတီကြီးကို သာသနာကွယ်ချိန်မှာ နှောင်းလူများ ပြတိုက်ဖွင့်စား အပန်းဖြေစခန်းလုပ်စားနေလျင် အထဲက ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကို ဗင်ဂိုးပန်းချီကားလို့ အမြတ်တနိုး သိမ်းဆည်းထားလျင်တော့ ခိုးကောင်း ပြောင်းရွှေ့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပညတ်ဆိုတာ သူလဲပြော ကိုယ်လဲပြော ဖြစ်တာမို့ ပြောတဲ့အခါ ရှင်းပေမဲ့ တကယ် လက်တွေ့မှာ မရှင်းဘူး။ အလွဲသုံးနေသူတွေကလဲ သိသိနဲ့ဖြစ်စေ မသိလို့ဖြစ်စေ ငါတို့မှန်တယ် မွန်မြတ်တယ် ပြောမှာပဲ။ ခီများကို မသနားဘူး ငရဲကျမှာ.. သာမီးဒေါ်ဂလေး သန်ဆင်ခိုင်မ်ကိုတော့ ငရဲသားလောင်း သာမီးဖြစ်မှာ ယာဉ်နာဒယ်.. ဒါကြောင့် ဦးမာမွတ်ကို ဒီတသက် ယောက္ခမ အတော်ဗူး။ သန်ဆင်ခိုင်မ်လေးကို ခိုးပြေးမဲ..။
သူကြီးက ပိဋိကတ်သုံးပုံ နှုတ်ငုံရထားတာမသိလို့ ပါနော…။
အရင်တုန်းကဆို အနော်လဲ လှူတယ်ဗျ… တရက်ပေါ့…ကြည့်မြင်တိုင်ဘူတာကို တက်တော့ ရုတ်ကနဲ အနော့်ကို ဘေးက ဖြတ်ကျော်သွားတာ .. ပြီးတော့ အသိက သူ့ကို မြင်ဖူးတယ်ဆိုပြီး.. စဉ်းစားတယ်.. မရဘူး.. နည်းနည်းကြာတော့ လမ်းထဲကို အဘွားကြီးတယောက် သားလေးတို့ သမီးလေးတို့ရယ်ဆိုမှ… အော်.. လို့ သိသွားတယ်… တကယ်ပဲ လောကကြီး ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဗျ…
သဏ္ဍန်လုပ်သရုပ်တူပြုပြီး အနေချောင်လို့ အလှုခံနေကြတယ်ဘဲဆိုမလား တောင်းတယ်လို့ဘဲသုံးမလား အမျိုးမျိုးသောနည်းတွေနဲ့ အချောင်နှိုက်နေကြတာတွေပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်လဲအဲလိုတွေနဲ့ကြုံရင် အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကန်တော့သေးပါရဲ့လို့ဘဲ ပြောဖြစ်သဗျ။
တကယ်တော့ ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းနေကြတာဆိုပေမယ့် အိုမင်းနေလို့ မစွမ်းပေမို့ ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ ကိုယ်စွမ်းသန်မာနေတဲ့ ကလေးကအစ အရွယ်ကြီးထိ တောင်းရမ်းအလှုခံခြင်းကို အားမပေးစေချင်ဘူးဗျာ လူနေမှုအကျင့်စရိုက်ပျက်စေတယ်လေ။
တစ်ယောက်ထဲမြို့ထဲထွက်တုန်းက အ၀တ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဆေးရုံက ဆင်းလာတာ လမ်းစရိတ်မရှိလို့ မိန်းကလေးချင်းမို့ တောင်းရဲတာပါ ဆိုပြီး တောင်းလို့ တကယ်ပဲထင်ပြီး ပေးခဲ့တာ…..
အိမ်ပြန်ရောက်မှ ဒီလောက် အ ရ သလားဆိုပြီး ၀ိုင်းဆူတာ ခံခဲ့ရဖူးတယ်။
အမှန်တကယ် အခက်အခဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့သူကိုလည်း အထင်မှားပြီး မကူညီဖြစ်တာတွေ ဖြစ်လာမှာ။
ဒီပို့စ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်း ရည်ရွယ်ချက်က ဒါကိုပြောချင်တာပါပဲ..စိမ်းဗြဇေ မမရေ
မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင်စာအုပ်ထဲ အဲ့အချက်လေးကြိုက်လို့ ပို့စ်တင်ဖြစ်သွားတာပါ :))
လူလိမ်​​တွေ​တော့ ​လျော့ပါး ပ ​ပျောက်​သွားမှာမဟုတ်​ဘူး..
လူလူချင်း ကူညီတတ်​တဲ့ အ​လေ့အကျင့်​​တွေပဲ ​လျော့သွားမှာ…
ကားတိုက်ခံရချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ငွေညှစ်ကြတဲ့ လူတွေကြောင့်လည်း နောင်ဆို ကားတိုက်ခံရရင် လှည့်ကြည့်ကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
တကယ် တောင်းစားမှ ဖြစ်တော့မယ့်ဘဝမို့ တောင်းတဲ့သူတော်တော်ရှားပါတယ်
အဟတ်စ်… အဲဂလို သနားအောင် ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးတောင်းတာတင်မက…
အခုမှ ထောင်ကထွက်လာတာ လမ်းစရိတ်မရှိလို့ပါဆိုပြီး မိုက်ကြေးခွဲသလိုတောင်းတဲ့…
လူမိုက်ရုပ်နဲ့ ယောက်ျားအီကြာကွေးတွေလည်း ရှိပါသေး… ဟွင့် ဒါမျိုးတော့ xက်ယူ ပဲ…
မီးဆိုရင် ရွယ်တူတန်းတူနဲ့ ကလေးတွေဆို လှူ ဘူး…အဖိုးအဖွားတွေဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံမပေးဘူး…ဘာစားမလဲမေးပီး ၀ယ်ကျွေးလိုက်တာပဲ….
အာ့မျိုးတွေပြောရင်နော် … မဟာဂရုဏာရှင် ခလုတ်တဂျောက်ဂျောက်နှိပ်သူတို့က
ကျော်ဆိုရင် အိုက်လိုပုံတွေတွေ့ရင် ကျော်ပစ်ပလိုက်တယ် လူစိတ်မရှိဘူးပဲပျောပျော
ကျော်တို့နိုင်ငံမလဲ သဂျီးပြောတဲ့၎သိန်း အူးကြောင်ပြောတဲ့၎သိန်း ပီးရင်အဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကဘယ်နှသိန်း
နောက်… … … နောက်……. … လေဘာဒယ် အူးမိုက်ရယ်….
.ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်မှာအမှန်တကယ် အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေတွေ့ရင်တော့ .ထိရောက်အောင်ကူညီပါတယ်…ဒီလိုလိမ်ဆင်တွေကိုတော့အားမပေးချင်ပါဘူး
.၀န်ရောက်ကွန်မန့် ချီးမြှင့်ကြသူ အားပေးဖတ်ရှုသူအပေါင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်မ ကတော့ အောက်ခြေက ဆင်းရဲသား သူတောင်စား တွေ များလာတာ ပိုပိုဆိုးလာတာ မဆန်းပါဘူး လို့ ဘဲ ပြောချင်တယ်။
နိုင်ငံက မဆင်းရဲ ပါဘဲ သူများဆီမှာ လက်ဝါးဖြန့် တောင်းနေရတာ က ပိုပြီး ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒီလို ထိပ်ပိုင်းတွေ ကတောင် တောင်းစား နေတာ ကို မရှက်တော့ တဲ့ နိုင်ငံမှာ ဒီလို သူတောင်းစား မပေါမှ အဆန်းဖြစ်တော့မှာ။
ပေါ်တင်တောင်း၊ လိမ်တောင်း၊ လှည့်တောင်း၊ ဟန်လုပ်တောင်း နဲ့ ၁၂ကြိုး ကုန်ရောဘဲ။
ကျင့်ဝတ် ဆိုတာ ထိပ်ပိုင်း က စပြီး ထိန်းမပြဘဲ လက်အောက်ငယ်သား တွေ ကို ပြင်ခိုင်းလို့ မရဘူး ဆိုတာလေ။
“Tone at the top” တဲ့။
ကိုယ် က ကျင့်ဝတ် မဖောက်တောင် သူများ က ထင်လိုက်နိုင်ရင် တောင် ရှောင်ရမဲ့ အလုပ် က ထိပ်ပိုင်း တာဝန်ယူသူတိုင်း တာဝန်ပါ။
ဒါကို လူသိရှင်ကြား စား ဝါး နေ ပြီး ကျန်သူ တွေ ကိုတော့ ဥပဒေ တွေ ထုတ် ဟန်လုပ် အလုပ်လုပ် နေရုံ နဲ့ ဘာမှ မပြောင်းပါ။
ဒီနေ့ လို မီဒီယာ တွေ အရမ်းအားကောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ လူဟားစရာ ငပေါ ကြီး တွေ ဖြစ်လာတာ သတိထားဖို့ လိုလာပြီ။
ထိပ်ပိုင်း က သိဉာဏ် မဲ့ တာ တွေ ကလဲ လူ တွေ နဲ့ ဆက်ဆံတိုင်း ဟောင်းလောင်း ပေါ်လာတာ က ပိုပြီး ရှက်ဖို့ကောင်းသေး။
တရုတ်မှာတော့ ထိပ်ပိုင်း တွေ ဖြုတ်ထုတ် သတ် နေပြီ။
မှန်ကန်သူများ ထိပ်ပိုင်းမှာ ရှိနေရင် သတ္တိရှိဖို့လိုပြီ။
လွဲ သွားရင် စောဒီးပါ ကကြီးမိုက် ရှင့်။